INkonzo yoNyango ngonyango kunye noMthengisi | Hongyu
I-Ultherapyist yinkqubo ecacisiweyo kuphela ye-FDA, inkqubo engangenisiyo ephakamisa intamo, isilevu kunye nebunzi, kwaye iphucula imigca kunye nemibimbi kwisifuba esingasentla.Ngokucinga nge-ultrasound ngeUltherapy, amandla aziswa ngokuchanekileyo kwindawo apho aya kukunceda kakhulu- kwiziphumo ezijongeka ngokwendalo ukuba
phucula ngokuhamba kwexesha
I-Ultherapy ixhomekeke kunyango lwe-ultrasound ukuya nzulu kunolunye unyango olungelulo lokukhuthaza i-collagen stimulation.
Ukucinga ngemveli kwe-ultrasound ukuze ababoneleli be-Unyango babone ubume bezicubu abazinyangayo Oku kuqinisekisa unyango
Amandla asiwe apho aluncedo kakhulu kuwe, 1,2,4
Kulabo abangakulungelanga ukuphakanyiswa kobuso, unyango lwe-Ul lubonelela ngokusebenza njengonyango olunye kwizigulana ezininzi, neziphumo. Funda ukuba ungaluvuli njani utyando, aluchaphazeli umphezulu wolusu, ungayeki ukunyanga ulusu lwakho oluvulekileyo
I-Ultherapy isebenzisa i-microfocused ultrasound ukwenza umphumo wobushushu phantsi kolusu. Esi siphumo ngokuqinisekileyo siqhuma-siqala inkqubo yomzimba wakho ukwenza entsha, entsha
Njengeprotein yendalo, i-collagen isebenza ukunika ulusu ubutsha bayo ngokugcina iqinile kwaye ithoniwe. Njengoko i-agecollagen iphuka, kwaye isiphumo kukuphulukana namandla olusu kwaye
Ukunyaniseka2 Yilapho i-Ultherapy ingena khona kwaye iphakamisa, ngokusebenzisa unyango lwe-ultrasound12
AKUKHO BONELELO APHA
Ngokungafaniyo ne-lasers, amaza kanomathotholo, utyando, kunye nobunye ubuchwephesha, i-Ultherapy engafunekiyo igqitha ngaphezulu kolusu
Amandla e-ultrasound ane-imaging egxile-ekujoliseni isixa esifanelekileyo ekunene
ubunzulu kunye nobushushu obufanelekileyo. Isiphumo sisiqalo kumzimba wakho wokuvelisa i-collagen1.3-5
Iziphumo eziqinisekisiweyo ze-Ultherapy zicacile,
ukubonakala ngaphezulu kweenyanga ezimbini ukuya kwezintathu njengoko i-collagen entsha isebenza ukuphakamisa ulusu entanyeni, esilevini, nasebusweni-kunye nolusu olugudileyo kwisifuba esingasentla. Iziphumo zinokuphucuka ngaphezulu kweenyanga ezintathu ukuya kwezintandathu, kwaye zinokuhlala unyaka nangaphezulu * Ayizukuphinda iziphumo zokuphakanyiswa kobuso, kodwa i-Ultherapy isa
Enye indlela eqinisekisiweyo yezonyango engeyiyo eyokuhlasela engakulungelanga ukwenza uqhaqho
Unyango lufumaneka kuphela xa unelayisensi